Steven Gerrard Oo Sheegay Kooxaha Uu Jecel Yahay In Ay Man United & Man City Isku Dhacaan Wareega Xiga Ee Champions League, Muxuu Ka Yiri Liverpool – Kooxda.com
Home 2018 March Ingiriiska, Wararka Maanta Steven Gerrard Oo Sheegay Kooxaha Uu Jecel Yahay In Ay Man United & Man City Isku Dhacaan Wareega Xiga Ee Champions League, Muxuu Ka Yiri Liverpool
Steven Gerrard Oo Sheegay Kooxaha Uu Jecel Yahay In Ay Man United & Man City Isku Dhacaan Wareega Xiga Ee Champions League, Muxuu Ka Yiri Liverpool
Steven Gerrard ayaa shaaca ka qaaday kooxaha uu doonayo in ay ku aadaan kooxaha Premier Leaue ee Man City,Liverpool iyo Man United hadii ay soo dhaafto kooxda Sevilla una gudubto wareega 8 dhamaadka champions league.
Steven Gerrard ayaa shaaca ka qaaday inuu jeclaan lahaa inuu arko Manchester United oo wajahda kooxda ay jaarka yihiin ee Manchester City wareega quarter-finalka Champions League.
Halyeeyga Liverpool ayaa rumaysan in dhamaan kooxaha premier league si weyn u xiisayn doonaan in Pep Guardiola iyo Jose Mourinho iska hor yimaadaan tartanka ugu caansan yurub.
Isku dhaca labada kooxood ayaa la macno ah in kooxdii hore ee Gerard ee Liverpool ay ka fogaan doonto koox premier league ah wareeg 8 dhamaadka taas oo u furi karta wado fudud oo ay ugu gudbaan wareega semi-finalka.
Markii BT Sport waydiisay kulamad uu jeclaan lahaa in uu arko ka hor isku aadka jimcaha ee Champions League ayuu yiri”Waxa aan ka fikirayay in aan arko Man United Vs Man city, kulankaas ayaa noqon doona mid xiiso leh”.
Kadib markii Tottenham laga reebay tartanka waliba Juventus Lugteeda ku reebtay Gerrard ayaa la waydiiyay in uu jeclaan lahaa in ay Liverpool ku aado kooxda Juventus.
“Haa aad ayaan ugu farxi lahaa, Waxa aan aaminsanahay in ay Liverpool dhaawici karto kana dhalin karto goolal, waad ogtahay Juventus ogtahay midaas taas oo wel-wel ku noqon karta”.
“Aniga ahaan waxa aan ku kalsoonahay cid walba marka laga hadlayo labada lugood waxa ay noqon karaan kuwo adag”.